ဗုဒ္ဓဆင်းတု ဦးခေါင်းတော်မှ ဆံတော်များထွက်ပေါ် | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on December 4, 2013
Posted in: ဘာသာရေး.	Tagged: ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်.	Leaveacomment
ဘုရားဒကာဖြစ်သူ ဦးခင် မောင်ဦးက ”ဇူလိုင် ၁ ရက်က စပြီးတော့ ဘုရားရုပ်ပွားတော် ကနေဆံတော်တွေပွင့်လာတာ ကိုဖူးမြော်ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် မှာတော့ ရုပ်ပွားတော်လုံခြုံရေး နဲ့ အများပြည်သူဖူးမြော်နိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုပြီး ဦးတို့ ကိုးကွယ် တဲ့ဆရာတော်ကျောင်းကို နိုဝင် ဘာ ၃ဝရက်မှာ ရွှေ့ပြောင်းပူ ဇော်ခဲ့တာပါ”ဟုပြောသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ် မတ် ၁၆ရက် တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ် ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနရုံး ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးဝင်းဗိုလ် က ရာထူးတိုး နှင့် ပြောင်းတဲ့အချိန်တွင် အဆို ပါဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုပူဇော်ရန် ပေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဘုရား ဆံတော်မပွင့်မီအချိန်တွင် နေ အိမ်၌ ဝင်ငွေများတိုးပွားခဲ့ပြီးထူး ခြားဖြစ်စဉ်များဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဦးခင်မောင်ဦးက ပြော သည်။
”ဘုရားဆံတော်မပွင့်ခင် အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိပ်ရာ က စောင်ခေါက်တွေထဲမှာ လောက်ကောင်တွေတွေ့ခဲ့ရပါ တယ်။ ဘာအပုပ်အသိုးမှမရှိဘဲ တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဘုရားဆံတော် ပွင့်တဲ့နေ့မှာပဲ တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ ဘုရားမှာပူဇော်ထားတဲ့ သပြေခက် ကနေ အရွက်တွေထွက်လာပါ တယ်။ နေ့ချင်းကိုထွက်လာခဲ့ တာပါ။ ဘုရားဆံတော်ပွင့်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ငွေအလုံး အရင်းနဲ့တစ်ခါရခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးခင်မောင်ဦးက ပြောသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဘုရားဆံတော် ပွင့်ခြင်းသည်ဖြစ်ခဲသည့် ကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်ယခုထက်ပိုပြီး ထွန်းကားပြန့်ပွားလာနိုင်သည့် နိမိတ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပညာ သိပ္ပံဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာ ရေးကျောင်းဆရာတော် သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တပညာသာမိ ကမိန့် တော်မူ သည်။
ပညာသိပ္ပံဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေးကျောင်းဆရာ တော် သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇဘဒ္ဒ န္တပညာသာမိက ”နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာ ကျောင်းကိုရုပ်ပွားတော် ရောက်တဲ့ ည ၇ နာရီခွဲအချိန် မှာပဲ ကျောင်းဝင်းပြည့်ဖူးမြော် ပူဇော်သူတွေနဲ့ ပြည့်နေ ခဲ့ပါတယ်” ဟုမိန့်တော်မူသည်။ တိုင်းသူပြည်သားခုနစ် ရက်သားသမီးများအနေဖြင့် ကံပွင့်၊ ဉာဏ်ပွင့်၊ ဓာတ်ပွင့်၊ လာဘ်ပွင့်ပြီးတော့ စီးပွားရေး များ တိုးတက်ပြီး သာသနာပြု ခွင့်များရသည့်အပြင် လက်ရှိ ကျင်းပတော့မည့် (၂၇) ကြိမ် မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏အရေးအကြီးဆုံး သော အောင်မြင်မှုများရနိုင် အောင်ကျင်းပနိုင်မည့်ပွဲတော် တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည့်နိမိတ် များဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်သဒ္ဓ မ္မဇောတိကဓဇဘဒ္ဒန္တပညာသာ မိက မိန့်တော် မူ သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဆံ တော်ပွင့်သည့်ဗုဒ္ဓဘုရားဆင်း တုတော်အား ယာယီစံကျောင်းဖြင့် အပူဇော်ခံထားရှိပြီး နောက်ပိုင်း အချိန်များတွင် စံကျောင်းတော် များ၊ ဘုရားကျောင်းဆောင် များတွင် ပူဇော်ပြီး အများပြည် သူဖူးမြော် နိုင်ရန် ခမ်းနား စွာ စီမံသွားရန်စီစဉ်နေကြောင်း သိ ရသည်။
← ဗုဒ္ဓ၏ မိန့်ခွန်းသံ နှင့် တမန်တော်မျဒ် မိုဟာမက်(ဆွ) ပြောစကား ဘယ်လိုကွာသလဲ
အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဗုဒ္စသာသနာ ကွယ်ပျောက်သွားရခြင်းအကြောင်း →